Amathumba Wegazi LeBlogger njengoba Ulwazi Olungalungile Lwe-SEO lusakazeka | Martech Zone
Amathumba weGazi leBlogger njengoba kusakazeka imininingwane engafanele ye-SEO
NgoLwesihlanu, Novemba 30, 2007 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Kuthunyelwe nguChristina Warren:
Kithina, uhlobo lokuhlaselwa kwe-SEO okuvezwe kuleli sonto kusele izinyathelo ezimbalwa ukusuka kulokho amathani ama-blogger / amawebhusayithi akwenzayo nsuku zonke: ngamabomu zama izinjini zokusesha ukuze nje bathole ama-hits amaningi kusayithi labo, futhi ngokunwetshwa, mhlawumbe yenza amadola ambalwa. Ngaphandle kokuthi usebenzisa i-straight-up scam link-farm noma kakhulu, unenhlanhla kakhulu - isikhundla esiphezulu kunazo zonke sezinjini zokusesha emhlabeni ngeke sibe nezinzuzo ezihlala njalo uma okuqukethwe kungekho.
Impisi Eyodwa Ethukuthele
Okuthunyelwe okuphelele kuthole impendulo enamandla evela kuMichael ku I-SEO Blog kaGraywolf, othi ngokoqobo uChristina uyisilima esingazi lutho. Lolo hlobo lolimi luqinile kancane, angizukuhlasela uChristina mathupha, kepha ngizosho ukuthi okuthunyelwe kwakhe bekuwukuhlasela kwabantu abanjengami - abasebenza amabhulogi ethu ngothando nangobuchwepheshe bezobuchwepheshe ukuheha nokugcina okuningi abafundi.
Ukubona ubuchwepheshe benjini yokusesha nokwenza ngcono isiza sakho akufani nokucwaninga ithrafikhi nokuthola indawo engcono yesitolo sakho esekhoneni. Unomkhiqizo omuhle nesitolo esikhulu, akukhona ukuhlakanipha ukubeka isitolo endaweni enhle? Ingabe kunjalo gaming ngaphandle kokuthi ubeke isitolo sakho enkangala lapho kungekho muntu ongasithola khona?
UChristina ubonakala futhi engazi ngamandla weGoogle wokuhlaziya ngokunembile nokukala izixhumanisi. Uma kutshelwa iqiniso, ungakwenza konke ukugembula ongathanda ukukusho, kepha uma kungekho noyedwa okhomba isiza sakho, ngeke ube sesikhundleni isikhathi eside. Ukuthandwa kuyisihluthulelo kuwebhu, futhi ama-blogger asiza ukuqhuba ukuthandwa komunye nomunye. Ngisesha amakhulu ngeGoogle nsuku zonke, futhi kuyaqabukela ngithole ikhasi elikleliswe phezulu elingenalo ulwazi engilifunayo.
Ingabe Ukubhuloga Ithuba? Impela!
Uma ungasebenzisi amathuba akhishwe yizinjini zokusesha, uyisiphukuphuku nje. angiyona gaming uhlelo ngokugxila ekwakhiweni kwekhasi lami, okuqukethwe, ukukhethwa kwamagama angukhiye, njll. Ngibeka ukhaphethi obomvu weGoogle, iMicrosoft, neYahoo! ukungithola kalula futhi ngihlele okuqukethwe kwami ​​kahle.
I-Google ibhale iresiphi okufanele ilandelwe wonke amasayithi amahle. Uma ungeke ukwazi ukulandela iresiphi, ungangikhalazi kimi ngokuthi isidlo sakho sakusihlwa sinambitheka njengobudoti uma siqhathaniswa nesami. Iya ekuphekeni, landela imiyalo… bese ucela usizo lapho uludinga!
Tags: imikhuba engcono kakhuluukuthuthukisa i-imeyiliuhlu lwe-imeyliukuthuthukiswa kohlu lwe-imeyiliiqabungaumlando wokukhangisaLinganisa i-CPIsinciphisiubuhlakani bezenhlaloezokuxhumana imikhuba emihle kakhuluamathiphu omphakathi
IBlack Swan nePeanut Butter kanye neJelly Sandwich
Dec 1, 2007 ku-12: 44 AM
UDoug: Ukuphawula kwayo kanjena ngiyabuya kusayithi lakho. Iyaqondakala futhi icacile. Uqinisile impela kulokho kufanisa nesitolo esisehlane.
Ukumaketha kubaluleke kakhulu lapho inkampani enkulu isabalala ngokweqile ngolwazi futhi kubalulekile ukudlulela ekhasimende lakho. Akubizi nakancane yize izindlela ezifana nogaxekile ngizidelela kakhulu…
Ngama-blog abantu abancane bathola indlela entsha yokwenza iqiniso labo litshelwe futhi nabantu abadedela amandla abo bayacasuka. Ngicabanga ukuthi kuyizimpawu kuphela ukuthi bacabanga ukuthi amanye amaqiniso kunalawo akulungile neze…
Bazoba nokuvuka okunzima…
Dec 1, 2007 ku-9: 14 AM
Siyabonga ngamazwi akho anomusa, Bengt! I-Intanethi ibe yisilinganisi esihle ngempela.
UWilliam Caleb Rodgers
Dec 1, 2007 ngo-2: 38 PM
Kuzwakala kimi sengathi ukuphawula kukaChristina mayelana "nokudlala" kubhekisa kakhulu kulabo abasebenzisa amasu wesigqoko esimnyama. Okuyisisekelo ukwenziwa kahle kwebhulogi / isayithi yinto okumele bonke abathengisi bayazi noma bagcina beshiye umdlalo "ngokwakhona" ngikholwa ukuthi okungenani uyakwazisa lokho futhi uqinisile ngokuba nokuqukethwe noma okunye.
Ngokwazi kweGoogle ukukala ngokunembile amakhasi… alunge ngokwanele, kepha ngenze ukusesha lapho ukufakwa kuhlu oluphezulu bekungahlangene kakhulu nosesho ngaphandle kwamagama (amagama) angukhiye akhombisa embhalweni ngezikhathi ezithile.
Noma ngikuqonda kahle konke okushoyo uDoug, bengifuna nje ukwenzelela kuChristina - angicabangi ukuthi uyilungu Inani isilima.
Dec 1, 2007 ngo-3: 12 PM
Mhlawumbe leyo yinkinga, uWilliam. UChristina akahlukanisi ngamunye, umane aqoqe yonke i-blogosphere ndawonye futhi athi siyinkinga, hhayi isisombululo.
Nasi esinye isiphazamiso:
Kunezinkulumo eziningi ngaphakathi komphakathi wezobuchwepheshe, ikakhulukazi i-blogosphere mayelana nokusebenzisa i-SEO nokuthi ILUNGILE kanjani kuma-blogger futhi ayithinti kabi abafundi / abaseshi / abasebenzisi abajwayelekile. Amanga lawa.
I-SEO ayilungele abafundi nabaseshi? Ngempela? Konke kungamanga futhi amabhulogi anomthelela omubi emiphumeleni yokucinga? Ngithola usizo lwami oluningi kuma-blogs, hhayi amasayithi ezinhlobonhlobo… usizo ngokuthola abathengisi, intuthuko, i-SEO, ukumaketha, ubuchwepheshe… akuvamile ukuthi ngithole izinto ezingcono ngaphandle kwebhulogi.
Ngikholwa ukuthi amabhulogi ajwayele ukuvuleka ngokwengeziwe, athembeke futhi alinganise amawebhusayithi ezinkampani. Yingakho abantu bebanaka kakhulu - futhi nabo - iGoogle ibabeka phezulu. Izinkampani azikuthandi lokhu… empeleni, ziyakudelela ngoba kungaziphoqa ukuthi zivuleke bese ziqala ukuzibloga.
Abezindaba babejwayele ukucabanga into efanayo, behlala bengqongqoza i-blogosphere futhi besola bonke ububi babo ku-inthanethi kuma-blogger. (Njengoba besola abakwa-classified ukuthi bafa ku-eBay naku-Craigslist). Okungenani iMass Media ihlakaniphile, noma kunjalo, futhi manje ibhuloga!
Konke kumayelana nokuhlinzekwa nokufunwa. Ngicabanga ukuthi uChristina unephutha ngoba abantu bafuna lolu hlobo lokuqukethwe. Ama-Blogger akuyona inkinga. Ukungazi.
PS: Angicabangi ukuthi uChristina 'uyisilima', noma. Ngicabanga nje ukuthi akanakho ukuqonda okuqinile ngohlobo lokusesha, ukusebenza kwe-inthanethi, nokuthi angakusebenzisa kanjani kahle. Ngiyazi abantu abaningi abanjengoChristina!
Dec 3, 2007 ngo-9: 02 PM
Njengakho konke, kukhona umugqa omuhle phakathi kokuhle nokungahle kangako (kubi). Ngicabanga ukuthi kukuwo wonke umuntu uqobo ukwenza lowo mehluko, kepha maqondana ne-blogosphere kunzima kulezi zinsuku ukuthola okuthile okwenzekayo ngaphandle kokusebenzisa amasu athile we-seo athuthukile. Uma ufunda ibhulogi kaMat kulokhu ubona izitatimende zithi “akufanele wenze lokhu noma lokho kepha uma ngabe…” - lol 🙂
Dec 4, 2007 ngo-2: 10 PM
Lokhu impela kufana “nomdlalo” ngokuthi sonke kufanele sihlele umdlalo “wokubamba” ngamathrendi wakamuva… kepha lokhu kunjalo iyiphi Ibhizinisi.